Tsika Dhizaina - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Tsika LCD Ratidza Module, LCM, TFT, Tsika OLED Ratidza
LCD / LCM / TFT / OLED Tsika / Semi-tsika
Kunze kweiyo inowanikwa standard LCD / TFT / OLED kuratidza zvigadzirwa, HengTai inopa yakashongedzwa zvigadzirwa. Iyo yakazara portfolio inoita kuti zvikwanise kugadzira zvakagadziriswa-zvakagadziriswa mhinduro kune vatengi kuti vakwanise mashandisiro avo. Isu tine epamberi ekuratidzira matekinoroji anowanikwa ekushandisa mune yako dhizaini uye kana paine chero chinhu iwe chaunoda kuchinja nezve imwe yeedu aripo LCD / TFT / OLED kuratidza, tinogona kuzviita kuti zviitike. Uine makore anopfuura makumi maviri neshanu ruzivo, yedu yekutengesa uye timu yeinjiniya ichave newe kuburikidza neese maitiro ekuvandudza uye ichaona semi kana zvizere kugadzirisa kuita kwakabudirira kuratidzwa kunoitwa kune yega application.
Yedu LCD / TFT / OLED tsika dhizaini mhinduro dzinowanikwa mune dzakasiyana sarudzo maererano nezvinodiwa nevatengi. HengTai inogona kupa dzakasiyana sarudzo pane backlight mhando, pini uye chinongedzo, tambo, resistive yekubata skrini (RTP) uye inofungidzirwa capacitive (PCAP) yekubata skrini kana anti-inoratidzira kana anti-kupenya girare, kana tsika yekuvhara lenzi, ZIF PPC kana yakagadziriswa pcb board. kana yakazara yakazara mhinduro mhinduro kune yako chigadzirwa kunyorera, pamwe neSystem Yakabatanidzwa Solution.
Unoda rubatsiro nezve chigadzirwa dhizaini kana mhinduro? Bata nesu uchishandisa fomu iyi:
OLED / LCM / LCD Yakazara-tsika
OLED Bvunzurudzo Fomu
LCM Inquiry Fomu
LCD Yekubvunza Fomu
Yakagadziriswa dhizaini, yakasarudzika kuratidza, yakasarudzika oled kuratidza, yakasarudzika yakaitwa lcd, yakasarudzika girazi lcd, yakasarudzika color lcd, tsika yekutarisa saizi, gadzirisa lcd inogamuchirwa.